रोचक जीवन : बाघले आँखा निकालेका भदै बाघकै साथी
५ कार्तिक २०७५, सोमबार १७:०८
बाँके, ५ कात्तिक । सूर्यपटुवा–४, बर्दियाका भदै थारु प्रकृतिप्रेमीका रुपमा चिनिन्छन् ।
प्रकृतिमै रमाउने, प्रकृतिसँगै गुनगुनाउने उनी सजिलै शब्द सङ्कलन गर्दै प्रकृतिका गीत गाउन खप्पिस भएपनि हालसम्म कुनै एल्वम भने निकालेका छैनन् । कर्णाली नदीको कोठियाघाटमा पुल बनेपछि भदैले यस्तो गीत बनाए ।
मायाप्रीति लगाउ साली डल्ला होमस्टेमा
सामान्य पढ्न लेख्न जानेपनि पढ्न नपाएकामा निकै पछुताएका उनी भन्छन्, “बुबाले गाईसँग बाख्रा साटेपछि गोठालो भएँ । तीन कक्षाभन्दा धेरै पढ्न पाइनँ । कम्तीमा १० कक्षासम्म मात्रै पढ्न पाएको भए म ठूलो मान्छे हुन्थेँ । पढ्न नपाएकोमा निकै दुःखी छु ।”
एघार वर्षसम्म कमैया बसेका भदै कमैया मुक्त भइसकेपछि खरखरिया खन्ने क्रममा विसं २०६० मा बाघको आक्रमणमा परे । बाघको पञ्जा बायाँ आँखामा पर्दा आँखै गुमाएर बल्लतल्ल बाँचेका उनी अहिले वन्यजन्तु र जैविक विविधता जोगाउन संरक्षणका गीत गाउँदै हिँड्छन् ।
उनीहरूको मायाप्रीति नछुटाऊँ
बाघ हिँड्ने बाटोमा बाधा नपु-याऊँ ।’
उनले बाघ संरक्षणका लागि यो गीत गाएका हुन् । “जनावरको खुशीमा हामी किन रमाउन सक्दैनौँ ? मान्छेले जस्तै अन्य जनावरमा मायाप्रीति हुँदैन र ? भारतको हात्तीले हाम्रो हात्तीसँग माया लाउँछ । भारतको बाघले हाम्रो बाघसँग बिहे गर्छ । हामी किन उनीहरुको माया प्रीतिमा बाधक बन्छौँ ?”, उनको प्रश्न थियो ।
बाघका कारण आँखा गुमेपछि पीडामा परेका भदैले भने, “पहिले त मलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई खोजीखोजी मारौँ जस्तो लाग्थ्यो । तर, पछि बाघलाई नै आपत् परेर जोगिन मलाई आक्रमण गरेको होला भन्ने लाग्यो अनि बाघको बासस्थान संरक्षणमा जुटेको हुँ ।”
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने बीचको करिडोर निवासी भदैको जीवन बाघको आक्रमणपछि फेरियो । घरायसी कामकाजमै ब्यस्त हुने उनी त्यसपछि एकाएक वन्यजन्तु संरक्षणमा ब्यस्त हुन थाले । जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणकै क्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) बाट ‘अब्राहम संरक्षण पुरस्कार’ पाएपछि भदै ‘संरक्षणकर्मी’को उपनामले चिनिन थाले ।
उनले सुनाए, “अझ अङ्ग्रेजी चलचित्रमा अभिनय गरेपछि त संरक्षण क्षेत्र नै मेरो पेशा बन्यो ।” भदै बाघको आक्रमणमा परेपछि उसैलाई लडाएर बाँचेका थिए, टाइटानिकका कलाकार लियोनार्दो डिक्रापियोले आफैँ आएर सोही घटना बमोजिमको अभिनयसमेत गराएका थिए । फर्कंदा लियोनार्दोले दिएको चश्मा अहिले पनि उनले लगाउँदै आएका छन् ।
संरक्षणकर्मी भदैले भने, “आँखा गुमाउँदा पनि संरक्षणमा लागे । तस्करले गोली देखाउँदा पनि झुकिनँ । तस्करसँग झुकेको भए आज हामी निकुञ्जलाई नै जोगाउन सक्ने थिएनौँ । हामीलाई गर्व छ हामी संरक्षणका लागि एकजुट छौँ ।”
सरकारको नेतृत्व, डब्लुडब्लुएफको आर्थिक सहयोगमा १६ वर्षदेखि बर्दिया निकुञ्जमा शुरु भएको तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) ले बाघको संरक्षणका लागि काम गर्दै आएको छ ।